News - IC ibe akara site CCD Visual System
Ihe ngosi IC nke CCD Visual System na-akanye
Mgbawa bụ onye na-ebu eriri sekit agbakwụnye, nke a na-ekewa site na ọtụtụ wafers, ọ bụkwa okwu izugbe maka ihe ọkụkọ. Ihe mgbawa IC nwere ike iwekota ihe elektrọnik dị iche iche na efere silicone iji mepụta okirikiri, iji wee nweta ụfọdụ ọrụ akọwapụtara. Iji chọpụta ọdịiche dị na ibe, ọ kwesịrị ịme akara ụfọdụ, dịka ọnụọgụ, mkpụrụedemede na akara. N'iji njirimara nke obere nha na njupụta dị elu, nhazi mgbawa dị oke elu. Tụle na mgbawa mmepụta a na-adịkarị rụrụ na a uzuzu-free ogbako, na welara ga-adịgide adịgide na nwere ọrụ nke mgbochi kanta, laser marking igwe ga-akpa oke.
Igwe igwe laser dị ezigbo mma, nke nwere ike ịdepụta akara ngosi na-adịgide adịgide, ihe odide ahụ dị mma ma mara mma, ọ gaghị emebi ọrụ mgbawa. Igwe a na-ahazi akara mgbawa nke BOLN laser na-agbaso usoro ihe eji arụ ọrụ na nke nwere ike ịgbanwe, nke nwere ike ịmịpụta ngwa ngwa ngwa ngwa ma nwee ike dakọtara na ngwaahịa dịgasị iche iche yana nkọwa dị iche iche. N'iji usoro nhazi CCD, ngwa a nwere ike nweta oke nkenke na akara laser na-enweghị njehie.
The isi ọrụ nke igwe bụ CCD visual n'ọnọdu ọrụ, nke nwere ike na-akpaghị aka mata ngwaahịa atụmatụ na-enweta ngwa ngwa n'ọnọdu. A pụkwara iji ihe ndị dị nkenke mara obere ihe. Na ngwaahịa n'ọnọdu fixtures adịghị mkpa, mbenata Manual ike ma melite na-arụ ọrụ arụmọrụ.
Ngwaahịa a haziri ahazi nwere ike ịbụ okirikiri, akụkụ anọ, na ọdịdị adịghị mma. Usoro a dabara adaba maka obere ngwaahịa. Ọnọdụ trays na ofu fixtures na-adịghị mkpa n'ihi na nke a na ngwá, nke ukwuu optimizing laser marking nhazi okirikiri. Kemgbe ahụ, ngwaahịa ndị dị obere agaghị abụ ihe isi ike maka akara laser. Jiri sistemụ CCD anya, “obere ngwaahịa” na - aghọ “nke ukwu”. Enwere ike idozi nsogbu ziri ezi nke na-enweghị ike ịchịkwa site na igwe akara ọdịnala ebe a.
The CCD visual n'ọnọdu laser marking igwe nwere ike ibu ngwaahịa enweghị usoro, ifiọkde kpọmkwem n'ọnọdu na zuru okè marking, nke ukwuu mma na-akanye arụmọrụ. N'ịchọ nsogbu nke ụzọ nnweta siri ike, ọnọdụ na-adịghị mma, na nwayọ ọsọ ọsọ nke nsogbu mmebe ahụ, akara igwefoto CCD nwere ike idozi nsogbu ndị a niile site na iji igwefoto mpụga iji weghara atụmatụ ngwaahịa n'oge.
Ngwa akụrụngwa laser nwere ike ịchọta akụkụ ngwaahịa na ọnọdụ iji nweta akara ngosi ziri ezi. Dabere na nhazi igwefoto, enwere ike ịchịkwa akara ngosi ziri ezi n'ime 0.01mm.